THE BOTHAN - unique Tiny House @ Mackay's - I-Airbnb
Durness, Scotland, i-United Kingdom
Indlu encane ibungazwe ngu-Fiona
I-BOTHAN @ Mackay's iza nombono omangalisayo we-Atlantic yasendle, imizuzu embalwa kuphela ukusuka ogwini. I-Bothan iyistudiyo esincane esipholile esizimele esinikeza indawo enhle kakhulu ehlanganisa ikhishi lakho, i-en-suite yokugezela, umbhede omkhulu othokomele kanye nendawo encane yompheme ngaphambili enokubukwa okuhle kolwandle.
Isitayela somuntu ngamunye. Umklamo ohlanzekile. Umuzwa oyingqayizivele.
Ihlotshiswe ngokucophelela ngamathoni athulisiwe acashile kusetshenziswa izinto zemvelo, i-Bothan inikeza ukuhoxa okuwubukhazikhazi, okunothando kumhambi oqaphela kakhulu.
Ikhishi ngelesimanje futhi lihlome kahle ngazo zonke izitsha okufanele uzidinge futhi uma singenayo sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi sikutholele yona. Indawo yokudlela inezihlalo eduze kwetafula le-oki elenziwe ngezandla eliyingqayizivele, elilungele ukudla kothando kwabantu ababili abanokubukwa okuhle kakhulu!
Uzothola i-en-suite yokugezela eneshawa enkulu namalayini okugeza okuzilibazisa alungele wena. Umbhede onethezekile omkhulu ngokudlulele uza namalineni amahle kakhulu - indawo yokuyeka ngemuva kosuku olude.
I-Durness ilele esifundeni saseSutherland emaphethelweni aseNyakatho Ntshonalanga yeGreat Britain. Indawo ekude yasendle nenhle ye-Cape Wrath ijabulela enye yezindawo ezimangalisa kakhulu eYurophu - indawo ekahle yokuvakasha . Ubuningi bezilwane zasendle nendawo evulekile evulekile kudala umuzwa omangalisayo. Idolobhana lase-Durness lizungezwe ezinye zezindawo ezihamba phambili zokuhamba emhlabeni kanye nendawo engapheli eheha, eyenzelwe ukuhlola. Inhlanganisela yezici zemvelo ezibabazekayo, okungenani ugu olumangalisayo lwamawa aphakeme, amabhishi egolide asekelwa izintaba ezimangelengele kanye ne-moorland enwetshiwe kuqinisekise isifunda sethu sinegama elisifanele njengepharadesi labahamba ngezinyawo. Nganoma yiluphi usuku, ungase uzithole uhambahamba ogwini lolwandle olunesihlabathi, ubona imikhomo nama-puffin emaweni ethu amakhulu noma uvakashele isipoki setilosi elinentshebe e-Sandwood Bay.
Sithanda ukuhlangana futhi sibingelele izivakashi zethu kodwa sizishiye kahle ngaphandle uma kudingeka usizo noma iseluleko sethu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Durness namaphethelo